Jaakad dahaaran, jaakadaha Puffer, jaakado isku dhafan - Senkai
Haweenka biyuhu biyuhu huwadaan jaakada dibada 9220306
Sharaxaad: Dumarka daboolan jaakad daabacan oo jaakad bannaanka ah ayaa biyuhu ka soo horjeedaan isla markaana aan dabeyl lahayn. Iska caabbinta qolof adag iyo si buuxda oo cajalad loo duubay ayaa kaa ilaalinaysa daadinta iyo dhererka. Dumarka cufan ee 100% polyester dahaarka jaakada banaanka ayaa kugu diirinaya. Daboolka la hagaajin karo iyo xirmooyinka la hagaajin karo ayaa gacan ka geysan kara in dabaysha la joojiyo oo si fudud loo maareeyo cimilada qaboobaha xun, sida roobabka, daruuraha ama maalinta barafka. 2 jeebabka gacanta ayaa ku habboon nolol maalmeedka .Waxay ku habboon tahay dharka maalin kasta, sida barafka, barafka ...
Jaakada bannaanka ee biyaha ee Lady ee 9220314
Sharaxaadda: Jaakadda dusha ka baxsan biyaha ee Lady waa diiran oo aan dabeyl lahayn. Iska caabbinta qolof adag iyo si buuxda oo cajalad loo duubay ayaa kaa ilaalinaysa daadinta iyo dhererka. Dumarka cufan ee 100% polyester dahaarka jaakada banaanka ayaa kugu diirinaya. Daboolka la hagaajin karo iyo xirmooyinka la hagaajin karo ayaa gacan ka geysan kara in dabaysha la joojiyo oo si fudud loo maareeyo cimilada qaboobaha xun, sida roobabka, daruuraha ama maalinta barafka. 2 jeebabka gacanta iyo 1 jeebka laabta ayaa ku habboon nolol maalmeedka .Waa mid ku habboon xirashada maalin kasta, sida barafka, barafka ...
Jaakada dharka dhogorta haweenka ee jaakad isku-dhafan 17930
Jaakada dharka dhogorta caadiga ah ee haweenka ayaa laga sameeyaa 100% dhogor polyester leh weji jilicsan oo dhar ah iyo 100% naylo, raaxo la'aan bilaash ah. Stone ama Heather Obsidian, codadkan dhawaaqa ayaa waxay la shaqeeyaan lammaane kasta oo moodal ah oo aad ka fikiri karto. Dharka u xidho ama si caadi ah u joog, qaybtani waxay ku habboon tahay xaalad kasta iyo jawi kasta. Faahfaahinta ...
Jaakada la huwiyay Ragga pocke jiinyeer aan xuduud lahayn ...
Jaakadan Ragga ah ee loo yaqaan 'Padded Jacket' waa waxa aad ugu baahan tahay xilliga qaboobaha. Awoodda dahaadhka weyn, xitaa xaaladaha qoyan. Super-diiran oo fudud microfiber suufka weheliso marada biyo diidaya-waa ku fiican yahay maalin kasta xirtaan. Jaakada diirran ee leh xargaha jilicsan ee jilicsan ee ku yaal daboolka iyo xirmooyinka ayaa dabaysha ka celinaya. Koodhkan labiska ah ee ragga ayaa loogu talagalay loona abuuray si loo helo raaxo habboon iyo shaqeyn wanaagsan, taas oo kuu oggolaanaysa inaad sida ugu fiican u qabato intaad ku raaxeysaneyso ficil-celinta weyn ...
jaakada dibada faashad haweenka 8218394 wa ...
Jasiiradda banaanka loo soo duubay ee haweenka ayaa kuleylinaya. Biyo celisa, dabaysha iyo kuleylka diiran ee jaakada barafka ayaa looga hortagayaa qoyaanka roobka. Dabaysha duufaanta ee dheellitirka iyo xirmooyinka feeraha laastikada ee la adkeeyay ayaa ka caawinaya dabaysha inay banaanka ka baxdo.New-naqshad cusub ayaa ka dhigaysa jaakad tayo sare leh oo quruxsan.Waxay ku habboon tahay howlaha banaanka. Astaamaha: 1. Maro: dhar qolof ah: biyo diirran oo xirfad leh oo lagu dahaadhay, dharka dahaadhka leh: 100% caag / dhogor. 2.Waterproof & windproof: Dharka caaga sarsare ee tiknoolajiyada ah ayaa jidhkaaga ka dhigaya mid qallalan oo diirran ...
jaakada biyaha aan biyaha ka ilaalin ee haweenka ah 9220501-2-6
Jaakad duudduuban oo aan dabeyl lahayn oo haweenku dabaysha ka ilaalinayaan. Jaakada qolofta aan biyuhu lahayn waxay kaa dhigeysaa mid qalalan oo raaxo leh roobka iyo barafka .Hawlaha duufaanka la qaadi karo ee leh xargaha iyo kuleylka la hagaajin karo waxay ku darayaan diirimaad .Ka buuxinta tayada sare ayaa kuu diirineysa .Tani waxay ku habboon tahay howlaha gudaha iyo dibadda. Astaamaha: 1. Maro: dhar qolof ah: biyo diirran oo xirfad leh oo lagu dahaadhay, dharka dahaadhka leh: 100% caag / dhogor. 2. Biyo-la’aan: jaakadda haweenka ee xilliga qaboobaha waxay ka samaysan tahay dhar neefsashadu u diidi karto, dhammaantoodna jiinyeerrada waa ...
Koodhka dhogorta dumarka ee faux WARMY
Koodhka dhogorta haweenka ee xijaaban ayaa ka samaysan tayo sare Faux Fur jaakada dhogorta leh Kululaa oo sii ahaw tiradaada adag xitaa xilliga ugu xun ee cimilada jaakadan raaxada leh. Dabeecadda deegaanka waa mid dabiici ah oo dabiici ah.Hood iyo daboolida laastikada ayaa kahortagi kara dabaysha. Jaakaduna waa naqshad dareemaysa fudayd in la xidho. Waa wax iska caadi ah oo waliba si rasmi ah loogu arko labbiska, waa shey leh la qabsi ballaaran oo ballaaran. Ciyaarta kaamil ah ee dharka aad jeceshahay, lebbiska, dhogorta madow, jooniska jiifka, iwm Specificatio ...
Jaakada haweenka ee barafka aan biyaha galin NL0039KI-F
Jaakada barafka ee haweenka lagu xidho waa mid aan biyuhu xirin oo aan dabayl lahayn. Xirfadlayaasha biyaha celiya ee dahaarka leh, dahaarka fluff iyo dharka waara ayaa damaanad qaadaya kuleylka ugu fiican, Waxay la dagaallaysaa cimilada roobka ama cakiran. Hoodka la-hagaajin karo ee la-dhaqaajin karo ayaa kaa caawinaya in dabayshu ka baxdo oo ay raaxaysato. Qaabka ku habboon ee nasashada leh oo leh qalab dhaqso-qalalan. Astaanta daabacaadda ayaa muujineysa astaanta ku taal laabta bidix. Waxaa loo isticmaalaa Skiing-ka hoose, Barafka, Goobaha barafka lagu ciyaaro iyo ciyaaraha kale ee xilliga qaboobaha lagu qabto. Faahfaahinta ...
Aynu horumarkeena u qaadno heer sare
Waxaan dhameystirnay oo aan ka gudubnay xisaabinta warshad BSCI ee sanadkan. Dhamaanteen waan ognahay in shahaadada BSCI ay ka faa'iideysato warshadda: 1.Fuliso shuruudaha martida. 2. Hal shahaado oo lagu bixiyo ...
1. Dharka kaashka ah wuxuu leeyahay nuugista biyaha oo aad u fiican farqiga taangigiisa dheehnaana waa mid aad u yar, sidaa darteed waxay si gaar ah ugu habboon tahay dharka isboortiga, oo inta badan laga sameeyo dhidid, surwaal, ...
Iyadoo kor loo qaadayo wacyiga dadka ee ilaalinta deegaanka iyo horumarka tikniyoolajiyadda, maryaha dib loo warshadeeyay ayaa nolosheena soo galay. Shirkadeena waxay hada isticmaaleysaa dhar dib loo warshadeeyay t ...
Jaakada Barafka, Jaakada Ski, Jaakad Ski Dahaaran, Jaakada Ciyaaraha, Jaakada Ski-ga 80s, Jaakada maqaarka,